(tonga teto avy amin'ny Ahura Mazda)
Taorian'ny fanavaozana ny fivavahana mazdeana nataon'i Zaratostra (na Zoroastra) dia lasa Andriamanitra tokana sy tsy aseho sary no mihoa-draha ho an'ny zoroastrisma i Ahora Mazda. Araka ilay boky atao hoe Avesta dia i Ahora Mazda no ilay Fanahy fara tampony niteraka ireo foto-javatra roa mifanohitra, dia i Spenta Mainio (Spenta Mainyu) ("Fanahy Masina") sy i Angra Mainio (Angra Mainyu) ("Fanahy Ratsy"). Mihoatra ny zavatra rehetra azo tsapain-tanana ao amin'ny famoronana (izany hoe ny zavaboary rehetra) i Ahora Mazda. Izy no rain'i Atara (Atar)("Afo masina"), izay miseho amin'ny alalan'ny Afo voalohany indrindra izay fahazavam-baratra, tsy azo tsapaina, nefa nialoha sady niteraka ny fanazavan-danitry ny afo-masoandro sy ny afon- kintan'ny Tontolo.
Amin'ny zervanisma dia i Ôrmozda (Ormudz)(fanafohezana ny hoe Ahora Mazda amin'ny teny pelevy) sy i Arimàna (Ahriman)(fanafohezana ny hoe Angra Mainio amin'ny teny pelevy) dia anjakan'i Zervàna (ny "Fotoana tsy misy fetrany"). I Ôrmozda dia rafin'i Arimàna, ilay anehoan'ny Zoroastriana ny Ratsy. Izy no mpitondra ny arta (izany hoe ny fahendrena sy ny fahamarinana).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahora_Mazda&oldid=990697"
Voaova farany tamin'ny 9 Mey 2020 amin'ny 01:09 ity pejy ity.